ukuqeqeshwa kwezinkuni ukujoyina izinkuni zemfundo yesikhathi semfundo antwerpen
I-Woodworker - Izinkuni
Ikhredithi ye-Craft 1th
Ngaphakathi kohlelo lwe-Hout uzogcwalisa amamojula e-2:
Kwimoduli I-Manual Woodworking funda ukuthi ungasebenzisa kanjani amathuluzi, sebenzisa amasu okunamathisela futhi wenze izinkuni ngemishini eqhutshwa ngesandla. Kwimoduli Imishini yokuHlanganisa ukufundisa ukuthi usebenze ngokuphepha ngemishini emikhulu embonini yokuhlanganisa. Uzofunda ukukala nokubala ubukhulu, sebenzisa izitsha zokulinganisa, ukufaka izinkuni eziqinile kanye nokwaziswa kwamashidi ngemishini yokwenza izinkuni.
Ngakho-ke ufunda njengomuntu oqeqeshiwe onamakhono futhi owazi kahle olawula umkhiqizo wezinkuni zezinkuni kanye nezomshini.
Niyathanda yini ukusebenza ngezandla
Ungumuntu osebenzayo futhi onguchwepheshe onjiniyela
Ukuqeqeshwa umbazi wezinkuni kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemine.
Uqala emotweni yezinkuni ze-woodworking.
Ngesitifiketi se umbazi wezincwadi Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza ngokukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza njengoba imishini.
Ufunda nokusebenza ne umshini CNC.
Abasebenzi bezinkuni banomdla kakhulu emakethe yomsebenzi.
Ukuqeqeshwa I-Wood-joiner akudingeki ube nolwazi olukhethekile lwangaphakathi.
Kumele uthintane futhi unentshisekelo ekukhuni njengezinto ezibonakalayo. Kufanele futhi ungesabi imishini.
Umsebenzi wakho ubonakala kanjani futhi uyini amathuba okusebenza?
Njengomuthi wezinkuni unamathuba amaningi ngaphakathi imboni yemithi. Ungasebenza njengomxhumanisi wangaphakathi, opharetha, umenzi wefenisha, kodwa futhi njengomakhi wangaphakathi.
Njengombazi wezinto zangaphakathi ubeka iminyango yangaphakathi, i-parquet, amakhabethe, izindonga kanye nokufaka. Njengomakhi wangaphakathi wenza amakhishi, ugqoka futhi unakekele ukubekwa kwezinto ezahlukene.
Ngokuvamile uzoya kule nkambo sebenzisa.
Ukuqeqesha izinkuni ze-Joiner izinsizakalo zesikhathi esigcwele ngemininingwane
Ku- ukuqeqeshwa izinkuni Amamojula alandelayo anikezwa: Umbazi wangaphandle, umbazi wezingxoxo zangaphakathi, umphathi wephini, ingcweti yokwakha yangaphakathi;
Uzofunda, phakathi kwezinye izinto, amafasitela, izicabha, amasango, (roller) ama-shutters, ama-cornices okwenzayo nokubeka.
Uzofunda amakhishi, izigqoko zokugqoka, izindonga ezikhohlisayo, izivalo zangaphakathi, ukufakela, ukugibela nezitebhisi ... nokwenza nokubeka.
Kodwa futhi: ama-verandas, amatharasi kanye nezakhiwo zokhuni ezenzelwe ukuqedela noma ukuhlobisa ingaphandle kwezakhiwo.
Imfundo yezinkuni Buiten-umbazi ukhona ngokwesibonelo Amamodeli we-4:
Ukufakwa kwe-chalkwork yangaphandle
Umsebenzi wokugqoka emsebenzini
Ufunda okuhlukile imishini yokwenza izinkuni setha, sebenze futhi uhlanze.
Uzofunda hhayi kuphela ukusebenza ngemishini kodwa futhi unikeze amathuluzi kule mfundo yesikhathi esigcwele.